Basale nomgodi kuphambana izidumbu - Ilanga News
Home Izindaba Basale nomgodi kuphambana izidumbu
Basale nomgodi kuphambana izidumbu
Esabo bese singcwatshwe ngomunye umndeni okusazanywa imvume yokuba simbiwe
NONHLAKANIPHO SHINGA noSKHOSIPHI MTHEMBU
UHLELI nethuna elivuleke gengelezi umndeni wakwaGumede eNkolokotho, eMtubatuba okuthe uyolanda isidumbu selungu lawo emakhazeni ase-Icebolethu Funerals, wathola ukuthi sesingcwatshwe ngomunye umndeni uzitshela ukuthi ungcwaba ilungu lawo.
ILANGA lilobe izolo ngoLwesithathu umndeni kaNkk Loslina Fanisile Gumede (71) usahleli nomgodi wethuna njengoba ubungakayitholi imvume yokuba ambiwe lapho ebesengcwatshwe khona.
Leli phephandaba lixoxe noMnu Leff Gumede okuyinkosikazi yomfowabo eshonile othe bekufanele bafihle ngeSonto kodwa badideka uma bethola ukuthi umufi ufihlwe ngoMgqibelo wumndeni wakwaNene eHluhluwe, uzitshela ukuthi ungcwaba uNkk Khathazile Kunene (97).
“Sivele saphambana amakhanda saphuthuma khona siyothola ukuthi kwenzekeni. Sithole ukuthi ungcwatshwe ngayizolo futhi bese kudingeka ukuba kungenelele nabomthetho ngoba besingasakwazi ukumumba sibuye sizomgcwaba njengoba besihlelile,” kusho yena.
Uthi selokhu abakhona, uyaqala ngqa ukubona into enjengalena futhi ubengazitsheli ukuthi umndeni wakhe ungake uhlale nethuna lithe gengelezi isikhathi eside kangaka.
“Okufike kwasikhubaza kakhulu njengomndeni wukuthi kuyavela ukuthi umndeni othathe isidumbu ubungenaso isiqiniseko njengoba kuthiwa kunelungu lawo lesifazane elishilo ukuthi ngathi akuyena lo muntu abebemlandile ngoba ebona ikhala elingafani nelesihlobo sakhe.
“Kuvela ukuthi ucindezelwe ngabesilisa abehamba nabo bathi uyigwala, nguye lo muntu abebeyomlanda,” kusho uMnu Gumede.
Uthi isidumbu sifakwe kwa-Icebolethu ngoba yiwona amakhaza abawaziyo, kanti umufi ubengenawo umasingcwabisane. Umthombo waleli phephandaba obukhona ngeSonto, uthi kube wumunyu sekudliwa ukudla namasaladi obekuphekelwe abazili, kodwa umngcwabo ungasekho.
Kusukela ngoMsombuluko le mindeni yomibili beyehla yenyuka ezinkantolo, ifuna imvume yokumba isidumbu sikaNkk Gumede.
“Inkinga nje lona omunye umndeni isidumbu sawo kasonakele ngoba sisemakhazeni, thina sinenkinga yokuthi uyonakala manje njengoba esenhlabathini nje,” kusho uMnu Gumede.
UNkk Ntombifuthi Kunene womndeni ongcwabe uNkk Gumede esikhundleni sikaNkk Kunene, uthi nabo basadidekile ngento eyenzekile. Uvumile ukuthi kuke kwaba khona ukudideka kulaba abebeyolanda isidumbu, okudalwe wukuthi besimbozwe ngopulasitiki, kungavumelekile ukuba basondele kusona ngenxa yokuqina kwemithetho ngenxa yeCovid-19.
“Ngiyacabanga ukuthi ukube bavunyelwa ukusibona kahle isidumbu, babezobona ukuthi akuyena lona wakithi ngoba ziningi izinto ababezombona ngazo.
“Bathi wayegoqwe ngopulasitiki, okwenza kwaba nzima ukubona kahle. Sithukile nje uma sekufika abantu base-Icebolethu behamba nomunye umndeni bethi kwenzeke iphutha.
“Bafike naso isidumbu sikaNkk Kunene sakuqinisekisa ukuthi nguyena ngempela,” kusho yena. UNkz Nomfundo Mcoyi we-Icebolethu Funerals, uthe uyalwazi udaba lwale mindeni futhi bayazama ukululungisa.
“Inkinga enkulu esibhekene nayo njengoba kuneCovid-19, imindeni iyesaba ukubhekisisa izidumbu. Lo mndeni okhuluma ngawo owathatha isidumbu, wafika waphikisana emakhazeni ngoba usaba ukubhekisisa.
“Abanye abantu benza iphutha bathumele umuntu okade wagcina ukubona umuntu, uthole ukuthi ubesegule wonda, wagqunqa nasebusweni. Baningi abangcwabi ababhekene nenkinga yokuphambana kwezidumbu, siyayicela imindeni ukuba izinike isikhathi ukubhekisisa umuntu wayo,” esho.
Uthi njengamanje sebeze bathenga umshini osifaka i-barcode isidumbu ukuze kuthi noma sesiphuma, i-barcode isebenze ukugwema lezi zigameko.
“Njengabangcwabi kasikwazi ukuzobaceba (abafelwa) kwabezindaba njengoba benza bona. Siyacela ukuba benze umsebenzi wethu ube lula ngokubhekisisa abathandiweyo babo.
“Nathi siyakwenza okungangamandla ethu ukuqinisekisa ukuthi sinezindlela ezahlukene zokuqinisekisa ukuthi isidumbu sihamba nabantu abafanele ngoba kubi uma sekuzombiwa izidumbu sezingcwatshiwe ngenxa yamaphutha abengagwemeka,” kusho uNkz Mcoyi. Bheka nasekhasini 12.
Previous articleKuyabhujwa yi-Covid ezikhungweni zokumaka
Next articleHamba kahle Magutshwa!